Isu munguva pfupi yapfuura takabatana-pamwe nevatengi vedu, TinderBox, pa 5 Zvinhu zveKubudirira Kwekutengesa Kurovera. Iyo mharidzo iri nyore uye mhinduro yanga iri inonakidza. Zvichitaurwa zviri nyore, zvakafanana nedzimwe nzira dzese dzatiri kuona… kugona kunyora kwakakura kutengesa chikumbiro kuri kubatsira kushandura mikana yakawanda kuva vatengi. Rini DK New Media kutanga kutanga, takapedza mazuva tichinyora zvirevo zvaive nemakumi maviri, makumi matatu nemakumi mana mapeji akareba. Yedu yekutengesa zvirevo izvozvi zvakagadziriswa, zvipfupi, uye kusvika poindi.